कृष्णसिंह लाेथ्याल काठमाडौं, २ फागुन
जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि जेल चलान गरेका पृथ्वी मल्ल करिब डेढ महिनादेखि उपचारका नाममा बिरामी नभए पनि अस्पतालमा छन् ।
उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले २३ पुसमा सवारी दुर्घटना मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
तर, जेल चलान गरेकै दिन डिल्लीबजार कारागारमा पुगेलगत्तै बेहोस भएर ढलेको नाटक गरेपछि डिल्लीबजार कारागारले मल्ललाई वीर अस्पताल पठाएको थियो ।
वीर अस्पतालबाट वसुन्धराको चिरायु अस्पताल रिफर गरिएका मल्ल २३ पुसदेखि सोही अस्पतालमा भर्ना भएर बसेका छन् । डिल्लीबजार कारागारका प्रमुख जेलर अरुण पाेखरेलका अनुसार मल्लकाे राेगबारे अस्पतालले कुनै पनि आधिकारिक जानकारी दिएकाे छैन ।
पाेखरेलले भने, 'चिरायु अस्पताललाई मल्लकाे राेग निकाे भइसकेकाे हाे भने डिस्चार्ज गरेर कारागार पठाइदिन अनुराेध गर्दा पनि अस्पताल प्रशासनले कुनै प्रतिक्रिया दिएकाे छैन यसले हामीलाइ पनि अप्ठाराे पारेकाे छ ।'
यता प्रहरीस्राेतले भन्याे, ‘अस्पतालका डाक्टरको मिलेमतोमा मल्ललाई डिस्चार्ज नगरी अस्पतालमा राखेको छ । मादकपदार्थ सेवन गरेर कार चलाउने मान्छे केको बिरामी हुन्छ ? न उनलाई कुनै घाउचोट नै लागेको छ ।’
पछिल्लाे समय अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएकाे कैदीलाई बिरामी नहुँदै अस्पतालले आर्थिक लाभकाे लाेभमा भर्ना गरेर राख्ने परिपाटी छ ।
कारागारले अस्पताललाई बारम्बार डिस्चार्ज गरेर कारागार पठाइदिन आग्रह गरे पनि अटेर गरेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ ।
यता अस्पताल प्रशासनले भने मल्लका बारेमा केही बोल्न नमिल्ले भन्दै केही बताउन मानेन । आफ्नो नामसमेत उल्लेख गर्न नहाचेका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘हाम्रो अस्पतालमा भर्ना भएको ४० दिन भएको छ । के बिरामी हो भनेर पनि भन्न मिल्दैन ।’
मल्लले जिल्ला अदालतको आदेशविरूद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएको र उच्च अदालतले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्ने आदेश दिए अस्पतालबाटै घर फर्किने योजनाका साथ उनी कारागार आउन अटेर गरेको कारागार प्रशासनको बुझाइ छ ।
दुई महिनाअघि २८ मंसिरमा बूढानीलकण्ठबाट बा१४च ६१२३ नम्बरको कार चक्रपथतर्फ तीव्र गतिमा हुइँकिँदै थियो । चालक थिए, पृथ्वी मल्ल । बूढानीलकण्ठकै सम्पन्न परिवारका मल्लले मादकपदार्थ सेवन गरेर उक्त कार हाँकेका थिए ।
बूढानीलकण्ठ मन्दिरबाट केही मिटरको दूरी पार गरेर बूढानीलकण्ठ स्कुलअगाडि पुग्दा उनको कार दुर्घटनामा पर्‍याे । कारको ठक्करबाट मन्दिरमा पूजा गरेर घर फर्किदै गरेकी गोरखाकी ४० वर्षीया लीला देवकोटाको मृत्यु भयो । पैदल यात्रुलाई समेत उनको कारले घाइते पारेको थियो ।
अध्ययनको सिलसिलामा अमेरिका रहेका मल्ल २३ मंसिरमा बिदा मनाउन काठमाडौं फर्किएका थिए । मल्ल सवार कारमा उनका साथी करिश मास्के, नायिका परमिता राणा र उनकै साथी मनीषासमेत थिए । नेपाल आएका बेला रमाइलो गर्न भन्दै उनीहरू बूढानीकण्ठकै ग्रिनल्यान्ड रिसोर्टमा बसेर फर्किने बेला कार दुर्घटनामा परेको थियो ।
उक्त रिसोर्टमा उनीहरूले अत्यधिक मादक पदार्थ सेवन गरेर कार चलाउँदा कार दुर्घटनामा परेको थियो । मेडिकल रिपोर्टमा समेत मल्लले अत्यधिक मात्रामा मादकपदार्थ सेवन गरेको उल्लेख छ ।
मल्ल आफैँले समेत मादकपदार्थ सेवन गरेरै कार चलाएको बयान अदालतमा दिएका छन् । उनलाई प्रहरीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा २ बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दर्ता चलाएको थियो । उक्त ऐनमा यस्तो कसुरमा १० वर्षसम्मको कैद सजायको व्यवस्था छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २, २०७६, ०१:४८:००
दाताले दिएको बिस्कुट र आफैले किनेको मास्कको भरमा अहोरात्र खट्दैछन् सुरक्षाकर्मी
लकडाउन : हाम्रा लागि कि प्रहरीका लागि ?
नर्सका दु:ख : हाम्रै सुरक्षा छैन, बिरामीले कसरी बाँच्ने आस गर्ने ?